बर्षायामसँगै च्याउ खाएर मर्नेहरुको संख्या बढ्छ, मृत्यु रोक्न च्याउको बारे यति जानकारी लिनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
बर्षायामको सुरु सँगै च्याउ खाएर ज्यान गुमाउँनेहरुको खबर आउँन थालेको छ । जतासुकै पाइने असुरक्षित च्याउ खाएर ज्यान गुमाउँनेहरुको सूचि यसपाली कति लामो हो भन्न सकिन्न । केहि समय अगाडीको समाचारमा थियो – बिहान जंगलबाट ल्याएको विषालु च्याउ खाँदा चितवन कविलासपुरको एउटा परिवारका ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । एकजनाको गम्भिर अवश्थामा उपचार हुँदै छ । च्याउ खाएर ३५ वर्षीय बुद्धिबहादुर चेपाङ, उनकी श्रीमती ३० वर्षीया सोमती चेपाङ, उनका छोराहरु ९ वर्षका मानबहादुर चेपाङ र ६ वर्षका सन्तकुमार चेपाङको मृत्यु भएको छ । १८ वर्षीय छोरा अर्जुन चेपाङको भने गम्भीर अवस्थामा भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्ता समाचारहरुले अब फेसबुकमा खुब लाइक र सेयर बटुल्ने छन् तर यसबारे वास्तविक जानकारी भने त्यति सेयर हुदैनन् । यहाँ हामीले केहि जानकारी लेखेका छौँ । कृपया पढ्नुहोस् र जानकारी सेयर गर्नुहोला ।
खान योग्य च्याउहरु पनि बुझेर मात्र खानुपर्छ
धेरै प्रजातीहरु खान योग्य च्याउहरुलाई कृत्रिम रुपमा रोप्न या खेती गर्न सकिदैन । यसैले च्याउहरु जंगलबाट सकंलन गर्ने कार्य संसारभर नै चलेको छ । तर खान योग्य च्याउहरु पनि कुनै कुनै अवश्थामा बिषालु बन्न पुग्छन् । खान योग्य र पहिले खाएका च्याउहरु नै पनि कुहिन थालेपछि बिषालु बन्छन् । त्यस्तै कतिपय च्याउहरु कुनै निश्चित खानेकुरासँगसँगै खान हुदैन । जस्तै कोप्रिनस प्रजातीका च्याउहरु रक्सीसँग खाएमा बिषालु हुन्छन् ।
च्याउका बारेमा रहेका केही गलत धारणाहरु र तिनको खण्डन
खान योग्य च्याउहरु चम्किला र उज्याला हुन्छन् । धेरै खानयोग्य च्याउहरु चम्किला, उज्याला हुने भएपनि केही बिषालु च्याउहरुमा पनि यो गुण हुने गर्छ । धेरै बिषालु च्याउहरु सेतो रंगका हुन्छन् । एमानिटा प्रजातीको बिषालु च्याउ एमानिटा म्युस्कारिया चम्किलो रातो तथा पहेलो हुनेगर्छ ।
गलत धारणा १ : किराहरुले बिषालु च्याउ खादैनन् वा किराले खाएको च्याउ बिषालु हुदैन
बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सबै जीवजनावारका लागि बिषहरु एउटै हुँदैनन् । कुनै कुनै यस्ता बिषहरु हुन्छन्, जुन निश्चित जीवजन्तुलाईमात्र हानी गर्न सक्छन् । यसैले किराहरुका लागि बिषालु नहुने च्याउहरु मानिसहरुका लागि बिषालु हुनसक्छन् । एमानिटा फालोइड्स प्रजातीको च्याउमा किरा लाग्छन् तर यो मानिसका लागि बिषालु हुन्छ ।
गलत धारणा २ : बिषालु च्याउले चाँदीलाई कालो बनाउँछ
धेरै मानिसहरु पकाएको बिषालु च्याउमा चाँदी डुबाउँदा कालो हुने विश्वास गर्छन् । तर हालसम्म कुनै पनि बिषालु च्याउमा चाँदीसँग प्रतिक्रिया गर्ने तत्व भेटिएको छैन । यसको मतलब, च्याउलाई चाँदीसँग कुनै लिनुदिनु छैन र च्याउमा चाँदी डुबाउँदा चाँदीको रंगमा परिवर्तन हुदैन ।
गलत धारणा ३ : बिषालु च्याउहरु स्वादिला हुँदैनन्
धेरै मानिसहरु खानयोग्य च्याउहरुमात्र स्वादिला हुने र बिषालुहरु च्याउ तितो या टर्रो या वेस्वादिलो हुने ठान्छन् । तर यो सत्य होइन । एमानिटा च्याउ पकाएर स्वाद मानी मानी खाएकाहरु मृत्युको मुखमा पुगेर धन्न फर्किएका छन् । तिनलाई सोध्दा च्याउ खाँदा स्वादिलो भएको बताएका थिए ।
गलत धारणा ४ : राम्ररी पकाएमा सबै च्याउ खान योग्य हुन्छन्
कुखुराको मासु राम्ररी पकाएर (६० से. भन्दा माथि) खाँदा बर्डफ्लू लाग्दैन भने जस्तो हैन । कतिपय च्याउमा भएका बिष जति पकाएपनि बिषालु नै रहन्छ । अल्फा एमानाइटिन जस्ता च्याउमा पाइने बिषहरुले तापक्रमसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैनन् । यस्ता च्याउहरु जति पकाएर खाएपनि खतरनाक हुन्छन् ।
गलत धारणा ५ : बिषालु च्याउले भातलाई रातो बनाउँछ
यो गलत सोचाईले पनि मानिसहरु मृत्युको शिकार बनेका छन् । नेपालमा च्याउ खाएर बिरामी भएकाहरुले पनि च्याउसँग सेतो भात नै खाएका थिए । अहिलेसम्म कसैले पनि च्याउलाई भातमा मिसाउँदा रातो भएको देखेको बताएका छैनन् ।
गलत धारणा ६ : बिषालु च्याउको टुप्पो तिखो हुन्छ
एमानिटा फालोइड्स प्रजातीको च्याउको टुप्पो वयश्क अवश्थामा सतह मिलेको, टुप्पो तिखो नभएको हुन्छ । धेरै बिषालु च्याउहरुमा पनि टुप्पो तिखो हुदैन । त्यस्तै खानयोग्य च्याउहरुमा पनि टुप्पो तिखो हुन सक्छ ।
बिषालु च्याउ खाँदा देखापर्ने प्रारम्भिक लक्षणहरु बान्ता, पखाला, टाउको दुख्ने तथा रिंगटा लाग्ने हुन्छ । यसपछि बिरामीले केही सञ्चो भएको अनुभव गर्नसक्छ । तर बिषको असर केही क्षण पछाडी पुनः देखिन थाल्छ । कुनै कुनै च्याउले केही समयमा नै मृत्यु गराउँछ भने कुनै च्याउ खाएर प्रारम्भिक लक्षण देखिएको दुई तिन दिन पछि मात्र कलेजो तथा मृगौलामा असर देखाउँन थाल्छ । जसको दुई हप्ता भित्र मृत्यु हुन सक्छ । यसैले च्याउ खाएको केही समय भित्र माथि उल्लेख गरिए अनुसारका लक्षण देखिए तुरुन्त अस्पताल जानुहोस् ।
सबैभन्दा पहिले बिषालु च्याउबाट जोगिनु यस्ता च्याउ नखानु नै हो । व्यवसायिकरुपमा खेती गरिएका च्याउहरु सुरक्षित हुन्छन् । भरसक जतासुकैको वा केटाकेटीले ल्याएको च्याउ खाँदै नखानुहोस् । होस् गर्नुहोस्, च्याउ खान अनुभव र आँट होइन, ज्ञान चाहिन्छ ।
नोट : लेखमा प्रयोग भएका च्याउका प्रजाती या च्याउका नामहरु वैज्ञानिक नामहरु हुन् । यो लेख हामीले paniphoto.com बाट लिएका हौँ ।
अनुसन्धान अनुसार, उपचार गरिएको केही साता पछि सिलोकाइबिन लिने रोगीमा रोगको लक्षणमा कमी देखिन थाल्यो ।
Don't Miss it डन्डीफोर र छालासम्बन्धी समस्याबाट बच्न माछा खाने गर्नुहोस्
Up Next के हो डेङ्गु ? यसबाट कसरी बच्ने ? यसका लक्षण, साथै उपचारका उपायहरुको पूर्ण विवरण